Forum serasera malagasy Emission carbone - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Emission carbone
landja - 26/11/2007 15:25
Mba mila fanampiana kely aho amin'io resaka émission de carbone io. Eto amintsika eto Madagasikara mantsy tsy dia mbola misy an'io loatra, na dia betsaka aza ny CO2 eto amin'ny tanana, fa any andafy any toa efa mandroso be.
Ka mba mila fanampiana aho e, inona no dikan'ilay hoe "compensation des émissions de carbone". Misy olona manao bilan de carbone ve, dia avy eo raha positif ilay bilan dia manome compensation financière (tsy haiko hoe misy karazana compensation hafa ve?) mba hanenana azy?
Toa misy karazana "bourse" kely koa io resaka carbone io any andafy, izany hoe misy mpividy ary misy mpivarotra.
Ahoana no tena fandehan'ireo zavatra ireo.
Misaotra mialoha amin'izay manome fanazavana.
hery - 26/11/2007 19:56
Ny fahalalako azy aloha dia toa izao.
Tsy tena mila bilan manokana aloha ny emission de carbone. Ny zavatra rehetra atao, izay mampiasa énergie, dia mampitombo ny CO2 izay miely amin'ny habakabaka. Ny tsirairay mihitsy izany, isaky ny manao zavatra iray, ohatra hoe mandrehitra jiro, manao voyage, mahandro etc. dia mamela CO2. Ka rehefa mitambatra io dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana.
Misy ireo olona na vondron'olona na orin'asa izay mba tonga saina amin'izany (sady dokam-barotra ho azy koa ilay resaka) dia manao ezaka mba hanentsemana an'iny CO2 naeliny iny. Ny sasany ohatra mamboly hazo, ny sasany mandoa vola any amin'ny organisme izay miandraikitra ny fitandrovana ny tontolo iainana, ny sasany mitantana foibe fikolokoloana zanakazo sns.
Tandremo diso hevitra hoe mbola tsy tokony ho resaka ao Dago io fampielezana ny enton'arina io. Tsy misy fotsiny ny fandrefesana fa inoako fa Antananarivo dia anisan'ny misy emission CO2 be indrindra. Soa ihany fa malalaka Madagasikara ka isaky ny hariva dia entin'ny rivotra izany.
Efa misy ihany koa ao Madagasikara ireo orinasa izay manao an'io Compensation des Emissions de carbone io. Ny COTONA aloha no toa fantatro, raha tsy diso aho, noho ny hazo laniny amin'ny orinasany. Manana toby fikolokoloana zanakazo ry zareo.
Ry zalahy ao amin'ny namana seraesra Dago no toa maharaka bebe kokoa momba an'io.
sitlo - 26/11/2007 22:12
Ilay compensation aloha dia tsy haiko tsara. Fa misy diso kely ny tenin\_'i Hery.
Ilay mandrehitra jiro, dia tsy mandefa CO2. Raha tsy hoe jiro petrole angaha hoe, na groupe electrogene.
landja Mba mila fanampiana kely aho amin\_'io resaka émission de carbone io. Eto amintsika eto Madagasikara mantsy tsy dia mbola misy an\_'io loatra, na dia betsaka aza ny CO2 eto amin\_'ny tanana, fa any andafy any toa efa mandroso be.
Ny orin\_'asa angamba no ciblenao amin\_'io. Dia jereo tsara hoe inona ny orin\_'asa tena mila solika fa ireny no tena mandefa CO2.
Tena lasa lava be saga
Fa raha ao Antananarivo dia ny tomobil no tena mpandefa. Ambohidahy dia anisan\_'ny toerana maloto indrindra era-tany amin\_'io resaka io. Ilay izy misy tunnel io mantsy, sady toeran\_'ny embouteillage. Tsy vavarivotra ohatra ny tunnel Ambohijatovo. Tsy haiko raha izay no nialan\_'ny CCA tany.
Fa saingy io lazain\_'i Hery io. Entin\_'ny rivotra misidina ilay izy. Fa miakatra eny ambony fotsiny dia lasa effet de serre.
Fa rehefa cyclone dia tena lasa misidina alavitra mihitsy dia lasa ohatra ny madio i Antananarivo.
landja Misy olona manao bilan de carbone ve?
Misy dia misy tokoa. Ny ankizy niara-nianatra tamiko ohatra. Fa ny an\_'ilery tsy toerana mahaliana no nakany sample fa tia hitsilanilany hono izy: Ambatoroka. :-D
INSTN no misy ny detecteur, rayon X no ampiasaina. TFX no fiantsoana azy: tsy tadidiko ny T sady tsy dia ilaina fa ny FX hoe Fluorecence X.
Fa raha tena tia hankalaza ianao dia tunnel foana hakana fa sure aho hoe ireo no avo indrindra ny taux.
Dia ity koa connaissance generale: Malaza be ny global warming vokatry ny effet de serre. CO2 no hitanao, fa ny methane tena mahery be.
Izaho manokana no nandinika ity dia mety ho diso. Raha mandeha any ambanivohitra Andratofotsy, Andramasina sns ianao. Tsy dia be tomobil any, nefa rehefa tonga ny hain\_'andro dia tena mahamay be (vokatry ny Effet de serre).
Dia izao, avereno aty amiko raha diso. Ny tanimbary dia anisan\_'ny mandefa methane be. Magazine semi-scientifique no namakiako an\_'io. Dia ny fihosena tanimbary dia manena be an\_'io.
Fa saingy ny antsika dia rehefa hamboly vary ihany no hosena ny tanimbary fa rehefa hanao voly avotra dia asaina fotsiny. :idea:
Ketreo ny vahaolana dia tandremo ny ONG mpangala-bola.
Dia iray faharoa, connaissance generale ihany. Ny CO2 avoakan\_'ny volcano ao anaty 1 min dia ambony lavitra noho ny CO2 avoakan\_'ny camion 100. (tsy tena tadidiko ny chiffre). Noho izany, raha hiketrika global warming dia tsy ny fanakanana ny tomobil no atao vaindohan-draharaha fa ny hanalana ny CO2.
Ny an\_'ny vazaha: mbola ketrika fa tsy mbola mandeha. Connaissance generale indray, ny ranomasina no mifoka CO2 be indrindra. (ny plankton ao anatiny). Dia ny an\_'ny vazaha hoe: andefasana produit ny ranomasina hampitomboana isa ny plankton haingana fa ny fambolen-kazo miadana be sady mora may. Mbola ady hevitra be io anefa satria betsaka ny olona, na io siantifika aza anisany, miteny hoe tsy tokony hanaovana fanandramana ny planeta.
landja - 28/11/2007 13:21
Misaotra betsaka anareo namaly.
Azoko ny resakareo amin'ny production de carbone, sy ny effet de serre (avy amin'ny CO2, methane, eo koa ny gaz CFC).
Fa ny tsy azoko kely dia eo amin'ilay "compensation des émissions de carbone" (aleo carbone no resahana, fa aleo hijanona ny produits hafa toy ny methane sy ny sisa ambiny). Malaza be io any andafy any. Ary ny fahazahoako azy hoe ahenanao ny production de carbone-nao. Izany hoe raha namokatra carbone 100 kg enao, dia ahenanao ho 80 kg izay. Ka ilay 20 kg elanelany (100 kg - 80 kg = 20 kg) dia misy mividy.
Dikan'izany dia mahazo vola enao amin'ny fanenana ny carbone vakarin'ny orinasanao. Ilay fanenana moa dia mety hoe fanenana ny fampiasana carburant.
Tsy haiko io système nazavaiko io raha marina na tsia. Misaotra betsaka amin'izay afaka manome fanazavàna, na fanitsina.
Misy système iray hafa koa. Mamboly hazo betsaka enao, izany hoe mi-compenser an'ilay production de carbone. Fa amin'io indray, tsy haiko hoe ahoana no hahazahoana vola tahaka an'ilay eo ambony io (misy mividy ilay carbone). Ka raha mbola misy mahay manazava dia misaotra betsaka.